Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye ego na Google Adwords naanị iji chọpụta na mmefu ego ha apụla ma enweghị azụmaahịa ha nwetara. Ezie na ọ na-egosi na elu na Google Adwords bụ nanị ikele na n'elu usoro, ọ bụghị. Enwere ọtụtụ ihe na - emetụta itinye mgbasa ozi gị - nke ga - emetụta mmefu ego gị.
Site na Infographic: Otu esi eme ka uzo Google Adwords di nma site na DigitalNetAgency: Njirimara ogo Google bụ atụmatụ nke mkpa ibudata peeji gị, isi okwu, na mgbasa ozi dị na isiokwu ị na-ezube yana ndị mmadụ na-elele ọdịnaya gị, ebe mgbasa ozi gị ga-adị na ibe ahụ, yana ego ole Google nwere na-aga ịgba gị ụgwọ maka ebe mgbasa ozi gị. N'ebe a, anyị lere anya na Score Score ma tụlee otu esi emezi nke gị.
Tags: AdWordsadwords mma akaragoogle adwordsgoogle adwords mma akarakwụọ ụgwọ kwa Pịappcakara ogo